Wararka - CPHI & P-MEC Shiinaha 2020
CPHI & P-MEC Shiinaha 2020
HANGZHOU IMMUNO Biotech waxay kaqeyb qaadatay bandhiga CPHI & P-MEC China 2020, waxay soo bandhigeen noocyo kala duwan oo xirmada tijaabada ah ee COVID 19 iyo alaabooyin kale oo bandhigga ah, macaamiisha ayaa imanaya qolka si ay ugala tashadaan qulqulka aan dhamaadka lahayn waxayna la gaareen ujeedooyin iskaashi macaamiil fara badan.
Subaxnimadii Diseembar 15, 2020, CPHI & P-MEC China 2021 waxaa lagu qabtay magaalada Shanghai. Si si fiican loogu dhexgeliyo kheyraadka lagula dagaallamayo COVID 19, Shiinaha ayaa soo qabanqaabisay bandhiggan, HANGZHOU IMMUNO Biotech ayaa lagu sharfay inay ka soo qaybgasho bandhiggan.
Bandhigan, agaasimaha R&D Mr.li ayaa kooxda ku hogaamiyay kaqeybgalka bandhiga. Kaliya maanaan soo bandhigin wax soo saarka dhamaadka ee xirmada tijaabada COVID 19 sida tijaabada baaritaanka antibodies-ka 2019-ncov Igg / Igm iyo xirmada tijaabada antigens COVID 19 iyo alaabta ceyriinka ah ee baaritaanka baaritaanka COVID 19, injineeradeenu waxay kaloo bixiyeen taageero farsamo oo ay siinayaan la-hawlgalayaasha iyo macaamiisha waana ka jawaabnay. su'aalaha goobta
HANGZHOU IMMUNO Biotech elites waxaa ka buuxa tamar, xamaasad, damiir leh, waxay si taxaddar leh ugu adeegaan macmiil kasta oo ajnabi ah oo leh tikniyoolajiyad heer sare ah iyo wax soo saar tayo sare leh, ka jawaab su'aalaha macaamiisha, kana wada hadlaan iskaashiga mustaqbalka si qoto dheer, taas oo sare u qaadaysa sumcadda iyo saamaynta IMMUNO. Intii lagu guda jiray bandhigga, boqolaal macaamiil ah ayaa u yimid qolkeena si ay ugala hadlaan arrimaha iskaashiga, shaqaalaheena iibka ayaa si dulqaad leh u dhagaystay, ka jawaab celiyay su'aalaha si wax ku ool ah, iyo si firfircoon u bixiyay xalal, waxayna gaareen ujeedooyin iskaashi macaamiil badan oo ku yaal goobta bandhigga. qiimeynta alaabtayada, laakiin sidoo kale adeegyadeenna si heer sare ah loo aqoonsan yahay.
CPHI & P-MEC Shiinaha 2021 waxay ku dhammaatay si qumman. Waxaan rajeyneynaa inaan kula shaqeyno si aan u raadino horumar isla markaana aan wadajir guul ugu abuurno!
Hangzhou Immuno waxay, sida had iyo jeer, siineysaa macaamiisha wax soo saar tayo sare leh, adeegsi feker iyo feejignaan leh isla mar ahaantaana, waxaan sii wadi doonaa inaan sameyno dadaal aan kala go 'lahayn oo lagula dagaalamayo COVID 2019 si loo horumariyo loona soo saaro wax soo saar wax ku ool ah si loola dagaallamo fayraska.